Fanatsarana ny fitaterana an-drenivohitra : HO AVY NY FIARABE AVY AMIN’NY FANJAKANA -
AccueilRaharaham-pirenenaFanatsarana ny fitaterana an-drenivohitra : HO AVY NY FIARABE AVY AMIN’NY FANJAKANA
18/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Orinasa manana ny lanjany maneran-tany eo amin’ny famokarana fiarakodia ny orinasa Donfeng ary isan’ny hamatsy fiara lehibe antsoina hoe “autobus intelligent” ho an’ny fitaterana eto an-drenivohitra sy ny manodidina raha ny tapaka omaly tolakandro teny Ambohitsirohitra nandritra ny fampahafantarana ny tetikasa lehibe TPRV, izay mikatsaka ny fanatsarana ny sehatry ny fitaterana eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin’ny ankapobeny, fotoana izay natrehin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo avy amin’ny minisiteran’ny Fitaterana ary ny famantarana ny toetry ny andro. Efa ela ireo mpitatitra no nanolo-kevitra ny fitondram-panjakana, nisy moa ny tetikasa nieritreretana hampidirana ireo fiara lehibe toa ity farany tamin’ny fitondrana Tetezamita saingy tsy tontosa akory !
Tsy kabary an-dampihazo fotsiny
Ny fitondrana tarihin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny alalan’ny minisitera misahana ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ankehitriny no mivoy ny tetikasa lehibe, hampidirina eto an-drenivohitra ireo fiara lehibe manaraka ny teknolojia entina hanatsarana ny lafi-pitaterana. Mahazaka hatramin’ny olona 49 ny fiara mpitatitra iray ary natao mifanaraka amin’ny filàna eto an-drenivohitra mihitsy izy ireo raha ny fanazavana nentin’ny minisitry ny Fitaterana, Benjamina Ramanantsoa. “Manaraka ny fenitra sy ny kalitao ary ny hary fenitra ireo fiara lehibe ireo, natao hanatsarana ny lafin’ny fitaterana sy ny fitantanana izy ireo” raha ny fanazavana nentin’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina.
Nandritra ny herintaona no nanaovana ny fanadihadiana ary manana eritreritra ny hametraka ny orinasa mpamokatra ny fiara eto an-drenivohitra ireo mpandraharaha mba hampidinana ny vidin’ny fiara. Anisan’ny mamokatra kojakoja ho an’ireo fiarakodia fanta-daza moa ny orinasa, toa ny Peugeot/Nissan/Citroen/Kia, hanangana ny orinasa eto an-toerana ireo mpandraharaha ka hitondra akony eo amin’ny lafiny ara-tsosialy izay hitondra famokarana asa maro dia maro, raha ny fanazavana nentin’ny tale jeneralin’ny ID Motors, David Ralambofiringa. Ankoatra izay dia efa mandeha ihany koa ny fifampiresahan’ity orinasa amin’ny fitondram-panjakana ny amin’ny tsy handoavana ireo hetra eo amin’ny fampidirana ireo fiara izay hampihena ny vidin’ny fiara hatramin’ny 30% ihany koa.
Ampiasaina amin’ny 26 Jona
Niditra an-tsehatra ny filoha Hery Rajaonarimampianina ho fanatsarana ny fitaterana eto an-drenivohitra, fanatsarana mifanaraka amin’ny fivoaran’ny teknolojia. Araka ny toromarika nomen’ny Filoha dia amin’ny 26 Jona 2017 no tokony efa hifamezivezy eto amintsika ireo fiara lehibe manaraka ny vaninandro. Hisy aloha ny zotra hanaovana andrana ary hitohy tsikelikely ny tetikasa, tsy atao latsa-danja ao anatin’ny famolavolana ny tetikasa ny fifampiresahana amin’ireo mpitatitra eto an-drenivohitra, hoy hatrany ny minisitra. Mifanojo amin’izay dia hisy ny fampiofanana an’ireo mpitatitra izay hamoy an’ireo fiara lehibe araka ny baikon’ny filoham-pirenena hatrany. Manaraka ny teknolojia ireo fiara lehibe izay ahitana ny GPRS, Wifi, mari-pandrefesana ny hafainganam-pandeha, ary tsy hikirakirana vola fa amin’ny alalan’ny “carte magnétique” izay azo fahanana no ahafahana mifamezivezy amin’ireo fiara moderna. Singa lehibe amin’ireo fiara moderna ireo ihany koa ny fihenan’ny tahan’ireo entona mivoaka amin’ireo fiara mihoatra amin’ireo fiara hafa miaro ka mampihena ny fahasimban’ny tontolo iainana.
Mankasitraka ny tetikasa ireo koperativa
Naneho fahavononana ny hampiasa ireo fiara lehibe izay tolo-kevitry ny fitondram-panjakana ireo lehiben’ny koperativa nifampiresaka taminay avy eto amin’ny Triatra : « Vonona hiroso amin’ny fanatsarana izahay, sy amin’ny fampiasana ireo fiara manaraka ny teknolojia, mety amin’ny zotra ampiasainay ireo fiara saingy mangataka vahaolana kosa izahay ho an’ireo olona ho very asa, toa ny mpamily mpanampy, tsapanay kosa anefa fa mandray andraikitra ny fitondram-panjakana manoloana ny filan’ny vahoaka eo amin’ny sehatry ny fitaterana » hoy ny lehiben’ny koperativa UCTS Fanavotana, Maradona. Marihina moa fa ho tazomina amin’ny sarany 400 Ariary hatrany ny saran-dalana ho an’ireo fiara lehibe manaraka ny teknolojia avo lenta, ireto farany izay ho ampiasaina eto an-drenivohitra sy ny manodidina afaka efa-bolana eo ho eo. Manodidina ny 10 hatramin’ny 20 moa ireo fiara hampidirina ho ampiasaina amin’ny tetikasa andrana voasafidy ao amin’ny « Projet pilote ».